Fumanisa ukuba ungayikhathalela njani impilo yakho yengqondo yonke imihla | IBezzia
Uyikhathalela njani impilo yakho yengqondo mihla le
Susana Garcia | 02/05/2021 18:00 | Ukuhlaziywa ukuba 28/04/2021 09:49 | Psicología, Psychology kunye nesibini
La Impilo yengqondo ngumqondo obanzi kakhulu Awunakho ukugqunywa kwinto enye kodwa phantse wonke umntu uya kuyazi xa uphilile naxa ungekho. Ukunyamekela impilo yethu yengqondo kubalulekile njengokukhathalela impilo yethu yomzimba, kuba zombini zinxibelelene ngokusondeleyo, awunakuba nenye ngaphandle komnye. Ke masibone ezinye iingcebiso zokufunda ukhathalelo lwempilo yengqondo yonke imihla.
Wethu Imikhwa kunye nobomi bethu bemihla ngemihla buchaphazela kakhulu indlela esizifumana ngayo ngokwengqondo. Impilo yengqondo kufuneka ithathelwe ingqalelo yonke imihla ukuze kufikelelwe kulungelelwaniso apho siziva silungile. Yiyo loo nto kukho izinto ezininzi ezinokusinceda ukuba sibe sempilweni kwaye sibe nengqondo eyomeleleyo nesempilweni.
1 Ukutya Okusempilweni
2 Wunyamekele umzimba wakho
3 Khathalela abahlobo bakho
4 Ixesha lokuzonwabisa
5 Yenza into oyithandayo yonke imihla
6 Umbutho kunye nenkuthazo
Ukutya okusempilweni sesinye sezona zitshixo kufuneka sonwabe engqondweni. Nangona isenokungabonakali ngathi, impilo yomzimba ichaphazela ingqondo yethu kakhulu kwaye ngokuchaseneyo. Yiyo loo nto kufuneka sizikhathalele ngaphakathi nangaphandle. Kubaluleke kakhulu yitya kakuhle ukuze uzive wonwabile kunye nokukhathalela umzimba ekuhambeni kwexesha. Ukutya kufuneka kulungelelaniswe, nazo zonke iintlobo zezondlo, kuthintelwe amafutha kunye neeswekile ezinokonakalisa impilo yethu. Ukuba sitya kamnandi siya kuba nobudlelwane obusempilweni kunye nokutya kwaye siyakuphepha ukutyeba kakhulu kunye nazo zonke iingxaki zempilo ezinokubangelwa kukutya okungafanelekanga. Yitya iziqhamo nemifuno yonke imihla kwaye usele amanzi amaninzi kwaye uyakuyibona impilo emzimbeni wakho ngokwendalo.
Ukunyamekela umzimba lelinye ilungu elibalulekileyo. Imicimbi yokutya ibaluleke kakhulu, kodwa nokwenza imidlalo ukuze uhlale ubuthathaka, umncinci kwaye usempilweni. Inkqubo ye- umdlalo womeleza izihlunu namathambo, ukunciphisa inkqubo yokuguga nokunceda ukuhamba kwethu. Ayisincedi ngokwasemzimbeni kuphela, kodwa iyanceda ekuphuculeni ingqondo kwaye iyenze ibengcono, kuba ukwenza imidlalo kusinceda sikhulule ii-endorphins kunye nezinye iihormone eziphucula inkqubo yethu iphela, kubandakanya amajoni omzimba.
Khathalela abahlobo bakho
Ukuba nabahlobo yinxalenye ebalulekileyo yokuba nengqondo esempilweni. Abahlobo lusapho olukhethileyo kwaye ukuba zilungile siya kuhlala sinenkxaso kuzo. Kodwa ubuhlobo abufanele buthathwe ngokungakhathali, kufuneka bukhathalelwe. Hlala nabani na ofaka into kuwe kunye nabo babalulekileyo kuwe. Nokuba ungumntu onomdla wokuzonwabisa, kubalulekile ukuba ube nabahlobo abalungileyo.
Kule mihla sigxile kakhulu kuyo yonke imisebenzi ekufuneka siyenzile ngaphandle kokuthathela ingqalelo ixesha lethu lokuzonwabisa. Amaxesha amaninzi siyalibala ube nexesha lokuzonwabisa yonke imihla eyethu, ukuphumla okanye ukwenza oko sithanda. Ke kufanele ukuba kube ngcwele. Yonke imihla kufuneka aphumle kuba xa singazihoyi ngekhe sikwazi ukubakhathalela abanye abantu okanye sibe sempilweni ngokwengqondo.
Yenza into oyithandayo yonke imihla
Kuya kufuneka senze into esiyithandayo mihla le. Eli licandelo eliyimfuneko ngokwenene kuba ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa kwenza amanqanaba oxinzelelo ukuba aye ezantsi kwaye siziva singcono. Ukuba iiyure zidlula ngokukhawuleza wenza into, yiyo loo nto Ngokuqinisekileyo uyayithanda kwaye uyayonwabela. Kungenxa yoko le nto kufuneka wenze into enje mihla le.
Umbutho kunye nenkuthazo
Kubalulekile ukuba ubomi bethu bunjalo ikwacwangcisiwe kwaye sineenjongo kunye nezizathu. Kulula ukuziva ukhululekile kwaye uzive ukonwaba ukuba sinobomi obucwangcisiweyo, kuba ngale ndlela sinokwenza ukuba ixesha lethu libe ngcono. Kwelinye icala, kubalulekile ukuba nenkuthazo, njengoko isinceda ukuba sivuke yonke imihla kwaye sibe namandla okuphumeza iinjongo zethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Uyikhathalela njani impilo yakho yengqondo mihla le
I-zucchini kunye ne-tart ye-cheese